IINGCINGA ZEPATIO EZINGAMA-35 (IMIFANEKISO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcinga zePatio ezingama-35 (Imifanekiso)
Iingcinga zePatio ezingama-35 (Imifanekiso)
Le galari yabelana ngeengcinga ezintle zepatio zamatye ezahlukeneyo zoyilo lwasemva kwendlu. Uhlobo lwelitye olukhethileyo emva kwendlu yakho luya kuba nefuthe elikhulu kwinkangeleko kunye nokuziva. Apha ngezantsi uyakufumana iingcebiso kunye nemibono yokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto zamatye ukwenza uyilo oluhle kakhulu lwepatio wena kunye nosapho lonke niyakuthanda.
Igceke elingasemva kulo mfanekiso ungentla libonisa ipatio yamatye ephakanyisiweyo kunye nodonga oluncinci lwethango kunye nezibane zangaphandle ezikhanyisiweyo. Umgangatho ukwilitye le-orenji elinombala we-orenji ocwangciswe ngendlela engaqhelekanga, ngelixa udonga lubonisa indibaniselwano yamatye omlambo omnyama, omdaka kunye ongwevu afakwa kulungelelwaniso olungahleliwe. Iitoni ezityebileyo, ezifudumeleyo zelitye ezisetyenziswe kwipatiyo zihamba kakuhle nefadesi yebhodi yebhodi emnyama engathathi hlangothi, kwaye ihamba kakuhle ngombala oluhlaza ongathathi hlangothi osetyenziswa kwifenitshala yepatio.
Indawo entle egadwe ngasemva okanye ingca engaphambili ayinanto ukuba akukho deck okanye ipatio yokonwabela umbono. Esinye sezona zixhobo zibalaseleyo zokusebenzisa ukutyibilika ngaphandle lilitye, kungekuphela ngenxa yokuba zininzi kakhulu iintlobo ezahlukeneyo ezinokuhamba nayo nayiphi na indlu, kodwa ngenxa yokomelela kwayo. Ilitye lendalo linokunyangwa ngetywina elikhethekileyo kwilitye elikhethiweyo. Oku kubalulekile kuba ilitye kufuneka likwazi ukumelana nemozulu, ukunxiba kunye nokukrazula kunye nomsebenzi wokulungisa.
Iindidi zamatye ePatio
Uyilo lwamatye ePatio
Iingcamango zePlagstone zePlag
Umkhwa -Lilitye elinobunewunewu liza ngemibala eyahlukeneyo ukusuka kwindlovu ukuya kumbala omdaka kunye negolide. Eli litye lithengwa kakhulu kugqityiwe okanye ukuwa, ukuze ungatyibiliki kwaye wenze iprofayili enomdla ngakumbi. Ukongeza, olu hlobo lwamatye luhlala lupholile nangona ligcinwe elangeni.
Ilitye leflegi -Iyaziwa ngobutyebi bayo obucekeceke beetoni zomhlaba ukusuka kumbala omdaka ngombala obomvu ukuya kumbala omnyama ongwevu, iflag yelitye ihlala isikwa ngokungaqhelekanga kwaye ihamba kakuhle nezikim zerustic schemes. Olu hlobo lwelitye lulondolozo olusezantsi kwaye luyabuchasa ubushushu, ukufuma kunye nokusetyenziswa rhoqo. Ukwahluka okuthandwayo kweFlagstone yiBluestone, ekhanya ngombala ohlaza okwesibhakabhaka-ngwevu ingakumbi xa ipolishiwe.
Isilayidi - Isetyenziswa kangangeenkulungwane, isileyiti sinzima kodwa somelele kwaye sinoluhlu olunomdla lwemibala ukusuka kwimibala eluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kwimithambo emfusa, luhlaza kunye nomnyama onzima.
Ikalika Uhlobo oluqhelekileyo lwelitye olukhoyo kwiindawo ezininzi, ilitye lekalika linombala omileyo othulisiweyo, oza ngemibala ye-beige, brown kunye nepinki.
Ilitye leCoral -Yenziwe ngelitye lekalika enezimbiwa ezivela kwii-fossil, i-corals kunye nesanti, ilitye lekorale linembonakalo ecekeceke kakhulu. Nangona ifanelekile kwiipatio eziya kujongeka ngakumbi, inokuthi ikwazi ukumelana nemozulu yomkhenkce wemozulu ebandayo. Ikwayinto engatyibilikiyo nokuba iyenziwa kugqitywe matte kwaye yomelezwa yimozulu ngokwendalo.
Ungalitshintsha njani igama lakho lokugqibela eArizona
Ilitye lentlabathi - Ifana nelitye lekalika, ilitye lentlabathi ikwalilitye lentlenga eliza kuluhlu ukusuka kumbala omdaka ukuya kobomvu. I-sandstone kulula ukusebenzisana nayo xa ifuna ukwenza uluhlu olunemibala efanayo-ilitye lentlabathi linotyekelo lokugcina ingqolowa efanayo kunye nombala xa uvela kwikwari enye.
Granite -Ezinye zegranite ebalaseleyo zivela e-Itali, njengayo yonke inyengane inokugxotha amanzi kwaye inomgangatho oqaqambileyo. Ikwayenye yamatye endalo anzima kwaye omelele kakhulu, kwaye yeyona nto ilungileyo xa ivutha amalangatye, yenza ipolish yendalo enqabileyo. Kulabo bafuna ukuxelisa inkangeleko yentlango iSahara Granite lukhetho olomeleleyo. Ngemibala enje ngee-shades ezimdaka ngombala, i-tan, igolide kunye nomnyama yenza ipatio enomtsalane kwaye yomelele.
I-Pea Gravel -Iyaziwa ngobungakanani bayo obuncinci obujikeleziweyo, ipevel ​​gravel lukhetho oluthandwayo kwabo bafuna uhlahlo-lwabiwo mali lwezixhobo zepatio. Kuba iligravel evulekileyo inokugalelwa ukuzalisa indawo ngokobume ngqo kunye nobungakanani obufunayo. I-ertyisi ye-ertyisi ikwafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala enje ngwevu, luhlaza, mdaka, mthubi, mhlophe kwaye luhlaza. I-Pea gravel ibonelela ngamanzi amdaka ngokugqibeleleyo okwenza ukuba ithandwe kwabo bafuna ipatiyo engabizi kwaye iphantsi.
Ngaphandle kwelitye elisetyenzisiweyo, kubalulekile ukuba ukhethe ubeko oluthile kuyilo. Ilitye linokunqunyulwa libe yimilo emincinci emincinci ukwenza umahluko phakathi kwelitye lendalo elahlukileyo, okanye lisikwe kwiimilo ezinkulu ezingaqhelekanga ukubonisa indawo enkulu yelitye lendalo kunye nemithambo.
Xa ufuna ukuhamba namatye amile rhoqo, ezinye iipateni ezinomdla zibandakanya iHeringbone, iBasket yeWave, ikhosi engacwangciswanga, kunye neFlanders. Xa ufuna ukwenza imilo ye-curvilinear, i-Serpentine lolona hlobo lubalaseleyo, kunye nenqanaba layo elingagudisiyo.
Xa usebenza ngamatye amakhulu, amile ngokungafaniyo, iCobble, iFlagstone, ilitye eliyintloko kunye nelitye likaBush ziipatheni ezilungileyo onamathela kuzo. Nangona zonke ezi zinto zinokubonakala ngathi ziipateni ezingahleliwe, ezi patheni zichaza izithuba kunye namatye okuqala xa kusenziwa ubeko.
Okokugqibela, ukuqaqambisa isahlulo esiphakathi, unokusetyenziswa koyilo olujikeleziweyo olufana nerosette, irosette enamakhasi kunye nekhampasi.
Apha ngezantsi kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyilwa kwepatio yamatye kwiindawo ezahlukeneyo. Uya kufumana izimvo zepatio zamatye ezijikeleze iphuli yokubhukuda, igadi, ithala, intendelezo, umva wendawo yangasemva kunye nokunye.
Le ndlu, indibaniselwano yayo yeendonga ezicocekileyo, ezijikeleziweyo ezimhlophe ezinendawo eyakhiwe ngentsika yelitye lentlabathi elicekeceke elijongene nocanda, ifezekisa ukuziva kweMeditera. Umgangatho wepatio ucocekile iithayile zesikwere kwilitye lekalika elingahlanjululwanga, isiseko esilungileyo sokusetyenziswa komqamelo obomvu omdaka kwifenitshala yefenitshala. Iziko lepatio lijolise kumngxunya womlilo owakhelweyo owenziwe kwi-stucco efanayo emhlophe efana neendonga ze-villa.
Eli khaya le-luxe lale mihla libonisa ipatio ende, emgceni ethe tyaba ukusuka kwelinye icala lendlu ukuya kwelinye, kwaye ihonjiswe ngefenitshala ekukhanyeni beige kwaye kumdaka ngombala omnyama, ukusuka kwitafile yekofu ukuya kwizitulo zelanga. Umgangatho wenziwe ngelitye elikhulu lelitye kusetyenziswa ilitye lekalika elingacocwanga. Udonga olusezantsi lwahlula ipatio echibini kwaye lisebenza njengeebhokisi ezincinci zezityalo. Nangona zibekwe kwilitye elikhulu lekalika, ubuso obume nkqo kwezi ndonga zincinci zise rougher, thinner, emnyama eyahlukileyo yelitye lentlabathi.
Le patio yasemva kwendlu yakhiwe ngokusebenzisa i-travertine tile. Ngombala wayo ongathathi hlangothi le tile yelitye idala imeko yendalo ehambelana ngokugqibeleleyo kunye neendlela ezahlukeneyo zoyilo kunye neendlela zokuhombisa umhlaba. I-Travertine yomelele kakhulu kwaye iyakwazi ukumelana nobunzima ukuya kuthi ga kwi-8000 yeepawundi nge-intshi nganye.
Nangona incinci, le patio yasemva kwendlu yakudala iyakwazi ukubonakala ifudumele kwaye imema ngenxa ikakhulu kwindawo yomlilo eyakhelweyo kwelinye icala. Ngeengqameko ezintathu zamatye, ilitye elibomvu nelomhlophe lenziwa ngeemfumba ezincinci, zixhaswe ludonga lwe-stucco enemibala e-tan. Umgangatho ubeka iziqwenga ezincinci zelitye lentlabathi kwimibala eyahlukeneyo, ebekwe kwipateni yekherringbone yakudala. Isiziba esincinci esiluhlaza sibonwa ngebhokisi yezityalo ephakamileyo enomthi omncinci nengca.
Le ndlela yakudala, yangasemva kwendlu inepatio ekhangeleka indalo kunye namanqanaba ayo amakhulu eflegi ngwevu emnyama, isamente endala. Ukugcinwa kweendonga kukwasetyenziselwa ukulungiswa komhlaba kunye namanyathelo amatye, enziwe kwilitye elingwevu elimnyama elifakwe kwizifundo ezingahleliwe. Enye itafile esisiseko kunye nefenitshala yesitulo ngombala obomvu obomvu weplanga uhleli kwelinye icala lepatio, ehambelana nobuhle bayo be-rustic. Xa ujonga izimvo zepatio zamatye ezijonge ngasemva kwendalo, ukusetyenziswa kweefleststones kunokunika uyilo ukubukeka kwendalo. Iiflegi zamatye zinomtsalane wombala womhlaba wombala omdaka nobomvu owenza isitayile sendalo.
Eli khaya lasekhaya laseSpain linodonga lwe-stucco kwi-tan ehambelana nomnyango oshushu womthi kunye neefestile kunye nezihloko. Iseti enkulu yeengcango zaseFrance zikhokelela kwipatiyo engaphandle, ebonisa ifanitshala ye-rattan ngombala omnyama, kunye nefestile encinci ye-bay kwicala elihonjiswe ngeengubo kunye nemiqamelo kwimifanekiso eprintiweyo. Umgangatho wenziwe kwisiphelo esibi samatye esanti esisikwe kumatye amakhulu eeflegi, kwaye umda kungqanyaniswe ngezibane zesitayile se-rustic kunye nabanini beekhandlela zeglasi.
Eli lizwe lesitayile seelali linodonga olumhlophe kunye nezinto zangaphakathi zeClassic ezibonwe kwiminyango emikhulu evulekileyo. Ipaseji engaphandle ifakwe ngaphakathi kwiikholamu ezenziwe kwilitye elixhonyiweyo eligutyungelweyo, eligutyungelwe yivy, kunye nelitye lelitye. I-patio yomoya evulekileyo inomngxunya womlilo ojikeleze i-veneer efanayo, ngelixa i-flooring yale ndawo icacile, i-samente engagqitywanga kunye nokugqitywa kwemida yamatye ephuma kumgodi ophakathi. Ifanitshala enzima eyenziwe ngomthi ijikeleze umngxuma osembindini womlilo kwaye ihonjiswe ngemiqamelo eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kwipatio ebukeka yendalo ngasemva kwendalo, amatye amakhulu eeflegi anokwahlulwa ngezikhewu ezinkulu ezivumela ingca kunye nokhula oluncinci ukuba lukhule phakathi kwaye lisebenze njengegrout. Le ngasemva iyila uyilo olunje kwaye icaciswa ngumhlaba ogqwesileyo owenziwe kule ndawo, ukusuka kwizityalo zayo ezinamanzi, imithi emide kunye nomdiliya otyatyambile okhule ngokukhazimlayo ngaphaya kwevaranda yesango.
Ime kwindawo enengca ethe tyaba, le patio yasemva kwendlu ineeseti zebluestone ehleliweyo ukuze isebenze njengendawo yokugcina udonga, yenze isangqa ngamangenelo macala omabini. Iziko linomngxunya womlilo owakhelweyo kwilitye elinye elixineneyo, ngelixa ukutyibilika kukwipateni yokutshintsha kwebluestone ebunjiweyo. Izitulo zewayini zakudala ezenziwe ngomthi ojijekileyo zihonjiswe ngasemngxunyeni womlilo kwaye zihonjiswe ngemiqamelo eluhlaza eluhlaza.
ivesi yebhayibhile ngothando lomfazi wakho
Umbala omnyama ongwevu, obomvu kunye nol-orenji ugcinwe kwikhondo elingahleliwe usebenza njengodonga lokugcina, njengenxalenye ephezulu yethambeka lomhlaba ukuya kule patio yamatye yanamhlanje. Umgangatho wepatio unamatye amakhulu amdaka namdaka asikwe kwimilo yoxande kwaye abekwe kwipateni yokuluka ibhaskiti, esenza imbonakalo yanamhlanje phakathi kwamagqabi ekwindla kunye nodonga olugciniweyo lwamatye agciniweyo.
Esi simbo sangasemva kwesitayile sineempawu ze-vermillion eziqaqambileyo kwifanitshala yendalo yokugqiba ifanitshala yangaphandle. Lo mthunzi uqaqambileyo uhamba kakuhle nethoni e-orenji-ye-beige ethulweyo yomgangatho wesanti, ebekwe kwipatheni ye-ashlar engahleliwe. Ikhosi ekumila kuyo ingqokelela yamatye aqokelelweyo kwisanti enzulu egqityiweyo ingqokelela kwiziko lepatio edala umjikelo womlilo osetyhula. Ipatio uqobo ijikelezwe yimithi yesundu kunye nemithi yepayini, eyenza imeko yangasemva yetropiki.
Isetyhula yoyilo kwilitye lesikwere elihambelana nomtsalane wobugcisa bale mihla yanamhlanje isitayile seVictoria, kunye nelitye lekalika lekalika kunye nophahla olunombala omnyama. Iziko lepatio linomngxunya womlilo owakhiwe ngeebhloko zelitye lobuso obuqhekekileyo, kwaye ijikelezwe zizitulo ezimnyama ezinamatye. Umjikelo ojikelezileyo ukwabonisa nodonga lokugcina olwahlula ipatio echibini, kunye neseti yezinyuko ezibukhali ezakhiwe kwiibhloko ezifanayo zelitye lekalika.
Iipaneli zesamente ezilula, xa zibekwe kakuhle zinokunika ipatio yangasemva ibukekile, ijongeka ngathi intle. Apha, iipavumente ezincinci zesamente ezisikiweyo zicwangcisiwe kwikhosi engahleliwe, emdeni we-cobble rosette embindini, apho itafile yeti yeerattan emnyama ilungiselelwe. Ukurhangqa itafile kungqamanisa izitulo ezimnyama zerattan, izitulo kunye neetafile ezinomqamelo omhlophe ocacileyo kunye nemilo yokuphosa. Udonga lwangasemva, olunomphezulu walo ohlotshiswe ngabatyali, lukwakhiwa ngezitena zesamente ezilula kwipateni yokutshintsha.
I-bluestone engwevu epholileyo enqulwe kumatye eflegi ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sepatio eblatt eluhlaza engaphandle esetiweyo enezinto ezenziwe ngokhuni olunombala otyheli. Iseti ifakwe imicu emhlophe ecocekileyo kunye nemilo eluhlaza okwesibhakabhaka enzulu, kwaye inqamlezwe ngasemva ngumbala ofanayo we-bluestone kwizicucu ezincinci ezibekwe phezulu ukwenza ibhokisi yezityalo.
Ipatio yangaphandle egutyungelweyo iphuma kwiiseti ezimbini zeglasi yokuhambisa iingcango kwindlu ephambili. Ngophahla oluhleliweyo oluhle kunye nezibane ezixhonyiweyo zerustic, iithayile zelitye lesanti elingacwangciswanga emgangathweni zihamba nomxholo weklasikhi. Ifenitshala yasendlini etofotofo, ukusuka etafileni yamatye kunye neyokutyela ngamatye ukuya kwizitulo ze-rattan ezimnandi kunye netafile yekofu eyenziwe ngomthi, ichitha indawo yonke. I-cottage evakalayo ivakalelwa ngakumbi iyagxininiswa yindawo yomlilo ekoneni eyakhiwe kwilitye elimnyama, eligudileyo elenziwe ukusuka phezulu ukuya ezantsi.
Indawo yokuhlala yaseMeditera inezindonga ezimhlophe ze-stucco kunye neziciko ze-turquoise ezihambelana nembala yolwandle oluhle. Olu jongeko lobunewunewu lugxininiswa ziithayile zeterracotta ezibomvu zasekhaya ezisetyenziselwa ukutyibilika, ezenziwe ngerosette enobunkunkqele ene-cobbled fan fan. I-tile efanayo yelitye isetyenziselwa i-ledge, eneentyatyambo ezimibalabala kwiimbiza zodongwe. Ifanitshala yedikeni yeyala maxesha, ilukiwe iirattan ehambelana nemisipha emhlophe ecocekileyo kwaye ikhuselwe kwilanga laseGrisi ngamanqanaba amakhulu afakwe emvuleni.
Usebenzisa iithayile zesamente ezilula kwikhosi etshintshisanayo kule patio yasemva kwendlu, uyilo luthatha ukuJongwa kweMizi-mveliso yale mihla, iyidibanisa neqonga elenziweyo elenziwe ngezitena ezipeyintwe ngwevu. Ibhentshi elincinci livalwe eqongeni laza laxhonywa ngamaplanga amnyama kwaye ahonjiswe ngemiqamelo enemigca. Udonga lwangasemva lukhule luchumile kunye nezidonga ezingena eludongeni, ludala indawo entle eluhlaza ngaphandle kokufuna ukugcina ingca enzima kwaye ibiza kakhulu.
Enye into enexabiso eliphantsi ekutsaleni nasekungeniseni elizweni ilitye lendalo, igalelwe ikhonkrithi inokwenziwa ngemida yemida, enje ngasemva kwendlu egqibe kwelokuba ihambe nobume bohlobo olunamacala amathandathu. Ukungatyibiliki kwaye kulula ukuyigcina, umbala ongwevu uvumela izitulo zerwood ebomvu ukuba zivelise kwaye zibonelele ngombala. Kukwasisiseko esihle kwingca egcinwe kakuhle kunye negadi ephuphuma iintyatyambo.
Uhlobo olukhulu lweambrela yohlobo lwentlanzi kwizikhuselo ezityheli ze-canary ipatio ebekwe ngentsimbi emnyama kunye nokuhambelana kwemiqamelo emthubi. Olu luhlu lwanamhlanje luhambelana neendonga ezicocekileyo ezimhlophe kunye nophahla lwethayile emnyama yendlu. Ukuhonjiswa kwezityalo zokuhombisa kugxininisa ngakumbi kuyilo lwala maxesha, ngelixa ubomvu nomdaka ngokungagungqiyo kumgangatho wamatye kunye neendonga zesitena zelitye zinika ukubanjwa okungaphezulu.
I-rattan ephothiweyo exhonywe ngeqanda ilahle izitulo zangaphandle zinika le ndawo yangasemva i-Contemporary rustic feel, ngakumbi njengoko ihambelana nesakhiwo sezindlu kwisitena esibomvu esibomvu, kunye nezitepsi zensimbi ezikhokelela kuyo. Isigqubuthelo somhlaba senziwa kwilitye elilula le-cobble kunye nezikhewu zengca phakathi. Ukulungiswa komhlaba kwale ndawo kubandakanya iintyatyambo eziqhelekileyo ezibekwe kwiibhokisi ezinkulu ezimnyama zimnyama, ezihambelana neseti yepatio yangaphandle.
Iinkozo ezomeleleyo, ezomeleleyo zale tiles yelitye lentlabathi zingqamana nobunzulu besitena esibomvu esisetyenziselwa umlilo kunye nebhentshi eyakhelweyo. Yenziwe kwipateni yeherringbone yeklasikhi kusetyenziswa amatye acocekileyo acocekileyo, i-flooring inyukela kwimiphetho yepatio, emdeni wemithi kunye nengca. Indawo yomlilo eyakhelweyo yenziwa ngombala omhlophe opeyintiweyo, ofana nokubekwa kwisitena esakhiwe ngezitena. Ibhentshi ikwanemibala emhlophe epeyintiweyo yomthi, kwaye ihonjiswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-beige.
Oku kulula ukwakha i-pea gravel patio kunye nomda obomvu wezitena wenza indawo entle yokumisela itafile yokutyela yangaphandle ukonwabela ngaphandle. Umngxunya womlilo ophathwayo wenza ulongezo olukhulu ukuphucula imeko yasebusuku.
Imfumba encinci yamatye angwevu amdaka kunye namdaka zibonelela ngomjikelezo wale patio yangasemva kwendlu, eyenziwe ngamatye amakhulu abomdaka ngombala obomvu kwaye yahlelwa ngobume besetyhula. Inkangeleko yamatye ihambelana kakuhle nombala omnyama ohlaza okwesibhakabhaka osetyenziselwa ulungelelwaniso lwendlu oluthe tyaba kunye nokucoca izinto ezimhlophe ezimhlophe.
Nangona ingekho ingca esele ikhulile, izikhewu ezinkulu phakathi kwala matye abomvu zibekwe kwipateni yelitye ekhuthaza ukukhula kwendalo kwengca okanye ukhula. Ukudala indawo enesiqingatha setyhula, ipatio ikhokelela ngqo kwindlu enamanqana enqanawe yakudala ngokusebenzisa amanyathelo amancinci kunye neminyango emhlophe yaseFrance.
Ukuhamba ngemibala enzima ehambelana nomthi we-cherry entle emva kwendlu, iindonga zendlu zikumbala obomeleleyo wezitena obomvu, oqhekeke kuphela ngumnyango omhlophe waseFrance okhokelela ngaphandle. Ipatio yangaphandle ikwakhona ifenitshala ye-orenji e-orenji edlamkileyo ngaphezulu kweethayile zesikwere zemveli zesileyiti kwimibala ebomvu nebomnyama.
Iindonga ze-stucco ze-tymco ze-perimeter zakha imvelaphi kumbala omnyama opeyintiweyo we-pergola ngaphezulu kwesingqengqelo sangaphandle kwiithoni ezithulisiweyo zegrey kunye ne-beige, ezihonjiswe ngemiqamelo emdaka kunye neye beige. Iimpawu zomgangatho wethayile kwi-orenji kunye grey, zisikwe kwiithayile ezincinci zamatye kwaye zibekwe kwipateni yomgama. Umfanekiso oqingqiweyo kaBuddha kunye nesakhelo somdiliya esirhubuluzayo sinika ipatio yangasemva isitayile esinee-Asia.
Izimvo zepatio zamatye ezisemva kwendlu ezingakhathaleliyo indawo enamanzi zinokubonelela ngendawo yokuphumla enomdla kwimvakalelo. Olu luyilo lwamatye e-grey slate angafaniyo enza ipatio encinci ecaleni kwendiza encinci yamanyathelo avela kumgangatho wamaplanga. Ilitye elimpunga lithelekisa kakuhle nomthi ofudumeleyo osetyenziselwa ibhalkhoni, kunye nengca yasekwindla kunye namahlamvu ayijikelezileyo. Ngaphandle kwepatio yigadi yelitye ehleliweyo enomjelo wokuqhushumba kunye nengca encinci.
Ilitye elisikiweyo elityaliweyo ngombala omnyama ongwevu kunye neorenji zilungelelaniswe zenziwa isetyhula, zibonelela ngepatio erustic kwindawo enkulu yasemva kwengca. Ejikelezwe yingca, olu hlobo lwesakhiwo lubonelela ngendawo elungileyo yokubamba iqela elincinci emva kwendlu kunye nengca.
Le ndlu yaseklasikhi ibonakalisa udonga oluqokelelweyo lwamatye oluza embindini weendonga zendlu kunye nokufikelela kwiibhodi ezinamaphiko enqanawa ngaphandle kwayo. Isitayela sezindlu esiqhelekileyo sihamba kakuhle kunye namatye amakhulu eeflegi asetyenzisiweyo asetyenziswa kwipatiyo yegadi. Phakathi kwamatye amakhulu abomvu, ingca iyavunyelwa ukuba ikhule, kunye neentyatyambo eziphantsi, ezineentyatyambo kwiipherimitha zayo. Ucingo olulula lwamaplanga kwimigca yeethoni efudumeleyo kwelinye icala lepatiyo.
Amatye amakhulu eeflegi angagqitywanga agqithisiwe ngokukhula kwendalo phakathi kwamatye abomvu. Ientyatyambo ezimthubi kunye ne-lavender zikwambombozela iperimeter, kwaye umbala wazo uyagxininiswa ngocingo olulula lwegadi olwenziwe ngetoni yeenkuni efudumeleyo.
Izitulo zohlobo lwengca ezipeyintwe ngombala obomvu odlamkileyo zenza ulwamkelo olufudumeleyo kule patio yokungena, ngakumbi xa ihonjiswe ngogqabhuko lweentyatyambo ze-lilac kwitafile yesinyithi eyakhiwe ngesinyithi. Oku kujongeka kweClassic kugxininiswa ngakumbi lilitye elikhulu leplansti eligudisiweyo kwiitoni ezifudumeleyo zemaroni. Udonga olufutshane lwegadi kwikhosi engahleliyo yeebhloko zelimestone zenza indawo ejikelezayo yepatio kwaye yahlulahlula ingca yangaphambili.
Yakhelwe ngakwimithi emikhulu yomthi wompayina, ilitye elihonjiswe ngokusondeleyo elityheli elimnyama kunye nokuhamba kweorenji ngqo ukuya kwiingcambu zemithi, zijikelezwe sisihlahla esinamagqabi asakhulayo. Kwicala, kukho umngxunya omncinci womlilo owakhiwe ngamatye amancinci aqhekeziweyo kwisilayidi esifanayo, kwaye unqamle isofa enamacala angama-L erattan emdaka ngombala. Isofa ihonjiswe ngemiqamelo ye-beige ethulweyo kunye neepilo zejometri.
Le patio yelitye elingasemva ihamba kakuhle ehlathini, ibe ngumgama omncinci kude nendlu kwaye igqunywe ngokupheleleyo sisigubungelo semithi. Eyakhelwe kwindawo yokumbiwa kwethambeka, ipatio ifakwe iibhloko zamatye amakhulu kwisakhelo setyhula setyhula, kunye nomngxuma womlilo ophakathi kwilitye elifanayo kodwa kwizicucu ezincinci. Ezinye iityhubhu zamatye ezisikwe ngokungaqhelekanga kwithoni efanayo e-orenji-grey zibekwe emgceni kwicala lepati ekhokelela kwindlu enkulu.
Ipatiyo encinci esetyhula kumatye amakhulu abomvu abekwe kwikona yocingo lweenkuni. Isitayela se-rustic yangasemva kwendlu nayo ibonisa ukukhanya kweenkuni zokugcina iindonga zayo kunye namanyathelo amancinci akhokelela kwipatio. Ehonjiswe ngezitulo zeplastiki eziluhlaza eziluhlaza ezimnyama zimnyama, zisasaza iingqalutye emdeni ngaphambi kokuba ingca yongeze umnatha.
Ukudibana kwangaphandle kunye noyilo lweeKhaya onokuzithanda:
Iingcamango ezingama-50 zePatio - Iingcamango zomlilo - Uyilo lweGazebo - Iingcamango zoyilo lwePatio - Uyilo lweBrick Patio
Iivesi zebhayibhile ekufuneka uzifunde emtshatweni
Umama ukuya kwintombi imibono yesipho somtshato
izimvo ezintle zosuku lweeValentines kuye
Kim kardashian ilokhwe yomtshato kanye
indlela yokumiselwa kwi-intanethi